FAPBM*- Taona 2020: 7,8 miliara Ar ho an’ny faritra arovana 35 | NewsMada
FAPBM*- Taona 2020: 7,8 miliara Ar ho an’ny faritra arovana 35
Par Taratra sur 14/12/2019
Natao sonia, omaly, toy ny isan-taona, ny tahiry famatsiam-bola avy amin’ny FAPBM ho an’ny faritra arovana 35, ampahany ihany eto amin’ny Nosy. 7,8 miliara Ar izany ho an’ny taona 2020, nifanarahana amin’ireo mpitantana faritra arovana. Famatsiam-bola hanatanterahana ny asa fiarovana sy ny fampandrosoana any amin’ireo faritra ireo, miaraka amin’ny mponina any an-toerana. Tsy mitovy ny famatsiam-bola, miankina amin’ny velarany, ny biby, ny zavaboahary ao aminy.
Eo anelanelan’ny 100 sy 400 tapitrisa Ar ny fanampiana azon’ny faritra isanisany. Misy teknisianina ao amin’ny FAPBM miara-miasa amin’ireo mpitantana faritra arovana, mamaritra izay tokony hatao. Manana ny maha izy azy avokoa ny faritra rehetra fa mbola tsy tratra ny famatsiana azy ireo. “Misy ny loza mitatao noho ireo doro tanety, ny fandripahana ala. Raha tsy misy ny faritra arovana, efa mety tsy hita intsony ny sokatra, ny tarondro, ny zavaboahary maro hafa”, hoy Raharijaona Liva, tale mpanatanteraka ny FAPBM. “Misy ny ezaka tsara vita nanampiana ireo faritra arovana ireo”, hoy ny filohan’ny filankevi-pitantanana, Rajoelina Sahondra.
75 tapitrisa dolara izao ny renivola avy amin’ny ireo mpamatsy vola: KFW alemaina, AFD, Conservation international, WWF, Banky iraisam-pirenena. Mpamatsy be indrindra ny KFW. Any ivelany izany renivola izany fa ny zanabola azo avy amin’izany no entina hanampiana ny faritra arovana eto an-toerana. Tahiry ho an’ny famatsiam-bola maharitra, handoavana ny karaman’ny mpiasa, hividianana fitaovana (fiara, moto …).
FAPBM* : Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar